Momba anay - Tianfeng Environmental Materials Technology Co., Ltd.
Manana traikefa amin'ny famokarana maherin'ny 10+ taona izahay
Izahay dia manam-pahaizana manokana momba ny fanaraha-maso ny aretina azo tsapain-tanana, fanamboarana lambam-panadinana azo ampiasaina amin'ny hopitaly miady amin'ny bakteria sy maharitra afo. Miaraka amin'ny vokatra avo lenta, dia lasa iray amin'ireo orinasa azo atokisana indrindra amin'ny sehatry ny fitsaboana izahay.
Ny fanoloran-tenanay amin'ny famoahana ny valiny dia nahatonga anay hanana fifandraisana maharitra amin'ireo mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao ary hanatanteraka ny fampanantenanay isaky ny mandeha.
Suzhou Tianfeng tontolo iainana Teknolojika momba ny tontolo iainana, natsangana tamin'ny taona 2008, dia orinasa iray manokana manamboatra ambaratonga avo lenta amin'ny hopitaly manana alàlan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana ary ny famokarana. Ny vokatray dia misy ambainy mahazatra azo ampiasaina, ambain harato ary ambainy vita pirinty. Izy rehetra miaraka amina farango sy marika misy hafanana. Ny lambam-panafody misy antsika vaovao dia natao hanoloana ireo ambainy efa azo ampiasaina sy azo hosasana ankehitriny, miaraka amin'ny tahiry lafo sy fanatsarana ny fifehezana ny aretina.
Tsipika famokarana POLYPROPYLENE
Ity tsipika famokarana ity dia filament polypropylene filament spunbonded nonwoven fitaovana lamba. Ny akora akorany dia polypropylene (PP). Ny lamba tsy tenona vokarintsika dia manana tanjaka avo, fahalemena tsara, tsy fahadiovana, fanoherana ny bakteria, fanoherana ny harafesina, tanjaka avo lenta ary taham-pitomboana. Ny lokony sy ny lanjan'ny lamba dia mety ho hafa arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa.
13+ taona niainana tamin'ny fanamboarana ambainy cubicle azo ampiasaina.
Voaporofo fa mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fanoherana ny bakteria sy ny lelafo.
Tsipika famokarana tsy miankina amin'ny bakteria.